Somalia: Tirada dadka u dhintay Corona Virus oo 5 qof gaadhay iyo dadku asiibay oo boqol ku dhaw | Berberanews.com
Home WARARKA Somalia: Tirada dadka u dhintay Corona Virus oo 5 qof gaadhay iyo...
Somalia: Tirada dadka u dhintay Corona Virus oo 5 qof gaadhay iyo dadku asiibay oo boqol ku dhaw
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay geeriyoodeen saddex qof oo ka mid ah dadkii uu gudaha dalka ku haleelay cudurka COVID-19.
Tirada guud ee dadka Soomaaliya ugu dhintay fayraska corona ayaa noqoneysa 5 ruux.Wasiirka Caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Fowsiya Abiikar Nuur, ayaa warbxinta maalinlaha ah ee arrimaha COVID-19 ku sheegtay in sidoo kale la diiwaan geliyay 20 kiis oo cusub.
Tirada guud ee xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya laga diiwaan geliyay ayaa gaaray 80.Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday dadka Soomaaliyeed inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka ah qorshaha xakameynta cudurka.
Waxay intaa ku dartay in uu “si xawaare leh dalka uu ugu faafayo, muhiimna ay tahay in laga wada shaqeeyo bed-qabka umadda”.
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay laba-laabantay tirada dadka uu cudurka Covid-19 ku haleelay gudaha dalka oo ay haatan gaartay 60 qof.
Tiradaas ayaa aad sare ugu kacday ka dib markii 24-tii saacadood ee la soo dhaafay la xaqiijiyay in 35 qof oo hor leh oo ku nool gudaha dalka laga helay xanuunka, kuwaas oo ay dowladdu sheegtay inay ku jiraan saddex kiis oo laga helay Jamhuuriyadda goonni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
Waa tiradii ugu badneyd ee maalin keli ah ay shaaciso dowladda Soomaaliya tan iyo markii la soo tabiyay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Coronavirus.
Ra’iisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo shirka guddoomiyay kulan ay yeesheen guddiga gaarka ah ee la dagaallanka Coronavirus ayaa sheegay in uu “faray wasiirrada Qorsheynta, gargaarka iyo arrimaha gudaha in Hey’adaha dalka ka howl gala ay ku war geliyaan inay u gargaaraan dadka danta yar ee dhibaatadu kasoo gaareyso saameynta COVID-19”.
“Ganacsatada Soomaalida ayuu Ra’iisul Wasaaruhu ka codsaday inay qaybtooda ka qaataan kaalmeynta dadka nugul”, ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Khayre.
Previous articleDawlad Dadkeeda Kula Talisay In ‘Coronavirus’ Ay Iskaga Daweeyaan Toonta, Malabka Iyo Basasha
Next articleDhahar : Waxgarad La Hadlay Xukuumada Somaliland Iyo Xaaladihii U Danbeeyey ee Puntland Kula Wareegtay